बिना यौ’नांग कसरी यौ’न सम्पर्क गर्छन्, यी पुरुष ? जान्नुहोस रोचक कहानी – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/बिना यौ’नांग कसरी यौ’न सम्पर्क गर्छन्, यी पुरुष ? जान्नुहोस रोचक कहानी
काठमाडौँ। मानिसलाई बाँच्नको लागि गाँस बास र कपासको जति आश्यक्ता पर्दछ । त्यतिनै जीवनलाई रोमान्चित बनाउन होस् या जीवनलाई खुसी साथ चलाउन होस् मानिसलाई यौ’न सम्पर्क गर्नपर्ने हुन्छ र यौ’न सम्पर्क राख्नको लागी यौ’नांग त हुनै पर्यो तर यौ’नांग नै नभएर जन्मिएका एक व्यक्तिले एक सय भन्दा बढी महिलाहरु सँग यौ’न सम्बन्ध बनाइसकेका छन् भन्दा तपाईलाई बिश्वास नलाग्न सक्छ ।
वार्डल जन्मजात रुपमा नामक अनौठो रो’गको सि’कार थिए । यो स’मस्या भएका मानिसमा यौ’नांग शरीर बाहिर विकास भएको हुँदेन । तर यस्तो हुँदाहुँदै पनि उनले धेरै महिलासँग से’क्स गरिसकेका छन् । अहिलेपनि एकजना युवतीसँग उनी डेट गरिरहेको उनी बताउँ छन् ।
उनको यौ’नांग नभएको कुरा झ्वाट्ट हेर्ने महिलालाई थाहा हुने कुरा भएन । उनी महिलालाई आफुप्रति आकर्षित गर्न माहिर छन् । अनि आकर्षित गरी यौ’न सम्पर्क पनि राखिहाल्थे । केटीलाई कसरी खुसी पार्ने भन्ने तरिका आफुले जानेको उनी दाबी गर्दछन् । आफ्नो प्रयास कहिल्यै पनि खेर नगएको उनी बताउँछन् ।
उनले भने,‘जब महिलाहरु मसँग नजिकिन्छन्, तब मैले उनीहरुलाई यति प्रेम गर्छु कि मेरो यौ’नांग नभएको कुरा अनुभुति नै गर्न सक्दैनन् ।’ वार्डलले आफ्नो यौ’नांग विकास गर्नका लागि धेरैपटक उपचार गराए । तर उनी सफल भने भएका छैनन् । एजेन्सी